Yahoo Paswọdu esi: Olee ịgbawa / mbanye anataghị ikike gị Yahoo Mail Paswọdu
> Resource> Utility> Yahoo Paswọdu esi: Olee ịgbawa / mbanye anataghị ikike gị Yahoo Mail Paswọdu
Anataghị ikike Yahoo Mail ??? Chefuru okwuntughe!?
Echefuru m yahoo mail paswọọdụ, & m cant-eme "Enyemaka" ihe n'ihi na m na-etinye a adịgboroja nzuzo ajụjụ & ụbọchị ọmụmụ, & email. M nwere mkpa ozi ịntanetị na chọrọ inwe ha azụ. Kedu ihe m kwesịrị ịme? Biko nyere!
Ka ihe dị mkpa na akaụntụ email, anyị niile kwesịrị oké njọ na ya, ọ dịghị adịgboroja nche azịza na ọzọ adreesị ozi-e, ma ọ bụ ị ga-akwa ụta na otu ụbọchị. Ọfọn, mgbe ọdachi mere, ị nwere idozi ya. Ọ bụrụ na e nwere nza nke dị mkpa ozi ịntanetị si dị iche iche ndị mmadụ, ọbụna dị mkpa ahịa, ị ga-mma chọta otu ụzọ na-paswọọdụ gị azụ. Ọ bụghị otú ahụ ike na-eme m, anyị nwere ọtụtụ ihe ngwọta n'ihi na ị na anataghị ikike Yahoo mail paswọọdụ ..
3 Solutions ịgbawa a Yahoo Mail paswọọdụ ke Windows 8/7 / Vista / XP
Ngwọta 1 Chọta azụ Yahoo mail paswọọdụ si ukara saịtị
Ọ bụrụ na ị na-echeta nche ajụjụ gị Yahoo mail, ị nwere ike mfe weghachite paswọọdụ gị si Yahoo Mail Official Site.
Ngwọta 2 weghachite Yahoo mail paswọọdụ si Chrome / FireFox nchọgharị
Ọ bụrụ na ị nwere Chrome ma ọ bụ FireFox na kọmputa gị, na ị họrọ "akpaghị aka Nbanye" mgbe loging gị Yahoo mail, ị nwere ike mfe na-azụ paswọọdụ ugbu a! Ma browers enye ịlele zọpụta paswọọdụ nhọrọ ugbu a.
Ka na-Chrome dị ka ihe atụ. N'ihi na FireFox nchọgharị, na-arụ ọrụ bụ fọrọ nke nta yiri. Ị nwere ike na-azụ paswọọdụ si FireFox ntọala
Firstly tinye "chrome: // ntọala /" na gị na Chrome.
Wee họrọ "Gosi Advanced Ntọala" na ala nke window
Chọta "paswọọdụ na iche-iche" nhọrọ na mgbe ahụ kụrụ on "Jikwaa zọpụta okwuntughe".
Ebe a niile akaụntụ na i zọpụta okwuntughe na Chrome ga-egosipụta. Ị dị nnọọ mkpa họrọ gị Yahoo mail akaụntụ ma họrọ "Gosi" na paswọọdụ taabụ. Mgbe ahụ, gị Yahoo mail paswọọdụ ga-Ewepụtara.
Ngwọta 3 Bilie azụ Yahoo mail paswọọdụ na a Yahoo mail paswọọdụ esi
Ọ bụrụ na ndị offcial saịtị adịghị aka, na i nwere nd-arụnyere ma ọ bụ uninstalled Chrome / FireFox nchọgharị n'ihu gị Yahoo mail paswọọdụ furu efu, m nwere ike Yahoo paswọọdụ hacker usoro ihe omume gị.
Nke mbụ niile, na-a Yahoo mail paswọọdụ esi: Wondershare WinSuite 2012. Nke a software bụ ike ịgbawa Yahoo mail paswọọdụ ke 3 nzọụkwụ.
Step1. Gbaa Yahoo paswọọdụ esi
Mgbe na-agba ọsọ Yahoo paswọọdụ hacker, gaa na "paswọọdụ & Key Finder" n'elu menu. Wee pịa "paswọọdụ Finder" button ke window ịnọgide.
Step2. Họrọ Yahoo mail / ozi paswọọdụ
Họrọ "Yahoo! Mail / Yahoo! Ozi Paswọdu" nhọrọ na pịa "Ekem" ịgbawa gị Yahoo mail paswọọdụ ugbu a.
Step3. Anataghị ikike Yahoo mail paswọọdụ
Ugbu a, i nwere ike mbanye anataghị ikike Yahoo paswọọdụ dị ka ndu ke window n'okpuru.
Cheta na: Ihe mere i nwere ike hacr Yahoo mail paswọọdụ na a usoro bụ na ozugbo ị na-akpaghị aka ite gị Yahoo mail na kọmputa gị, paswọọdụ ga-e dere na kọmputa gị na ị dị nnọọ ike ịnweta ya ozugbo. Ihe bụ ihe ọzọ, a usoro-enye gị ohere naghachi okwuntughe gị MSN, Hotmail, Gmail, Outlook, wdg Ma biko na-adịghị-a usoro n'uzo na ezighi ezi were.
Gmail Paswọdu esi: Olee ịgbawa / mbanye anataghị ikike gị Gmail Paswọdu
Olee otú Naghachi echefu Hotmail paswọọdụ ke Windows 8/7 / Vista / XP
Iweghachi emerụ Files: 3 Nzọụkwụ iji weghachi emerụ Files
Olee otú Idozi NTFS.sys efu ma ọ bụ merụọ Njehie
Olee otú iji chebe buut Sector si Viruses
MSN Paswọdu esi: Olee ịgbawa / anataghị ikike MSN Paswọdu
Olee otú Idozi idide Loading Error
2 Ụzọ Idozi "BOOTMGR Na-adịghị" Nsogbu
Olee otú Idozi Mfc80u.dll Njehie na Pụrụ Ịdabere na Irè Way
Ihe bụ na otú ndozi Mpr.dll Error